रवि लामिछने बिरु,द्ध हात धोएर लाग्ने प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको जागिर चट !
रवि लामिछने बि,रु,द्ध हात धो,एर लाग्ने प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको जा,गिर च,ट !
रवि लामिछने बिरु,द्ध हात धो,एर लाग्ने प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको जा,गिर च,ट !
सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको का,र्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने नि,र्णय गरेको छ । ´सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हालका का,र्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर भण्डारीलाई का,र्यवाहक अध्यक्षको जि,म्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ´।
भण्डारी केही दिनअघि मात्र काउन्सिलको सदस्य नि,युक्त भएका थिए ।´ बैठकले काउन्सिलको नियमावली नै परिवर्तन गरेर भण्डारीलाई नि,युक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए ´।त्यस्तै सरकारले युवा तथा साना ब्यबसाय स्व,रोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा डा. कल्याण रो,कालाई नि,युक्त गर्ने निर्णय गरेको छ´ ।
त्यस्तै सरकारले युवा तथा साना ब्यबसाय स्व,रोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा डा. कल्याण रो,कालाई नि,युक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ´।प्रेस काउन्सिलमा किशोर श्रेष्ठ ह,टाइए, का,र्यबाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी – मन्त्रिपरिषद्को निर्णय साभार –